रोचक बिसंगति सहकर्मीका टाउकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले झुन्ड्याएको अध्यादेशको तलवार! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /International/रोचक बिसंगति सहकर्मीका टाउकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले झुन्ड्याएको अध्यादेशको तलवार!
जारी स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। स्थायी कमिटीमा ओली चरम अल्पमतमा छन्। बुधबार झम्सिखेलमा भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता माधवकुमार नेपाल समूहको बैठकमा स्थायी कमिटीका ४४ मध्ये ३० जना सदस्य उपस्थित थिए। उनीहरूले स्थायी कमिटीको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले मान्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।
उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘स्थायी कमिटीले त्यस्तो निर्णय गर्‍यो भने हामी प्रधानमन्त्रीसँगै अर्को बाटो हिँड्न अभिषप्त छौं, त्यसैले त्यस्तो निर्णय नगर्नु होला।’
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न प्रचण्ड र महासचिव पौडेल उनको निवास पुगे। निवासमा ओली आफूनिकट नेताहरूसँग बसिरहेका थिए। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे, ‘तपाईंले अध्यादेश जारी गर्न लाग्नुभएको हो?’
ओलीले जवाफ दिए, ‘अझै तीन-चार दिन अध्यादेश आउँदैन।’
सचिवालयका एक सदस्यले प्रधानमन्त्रीको भनाइ यसरी अर्थ्याए, ‘ओलीले हामीलाई ‘सरेन्डर’ गर्न तीन-चार दिनको समय दिएका छन्।’
प्रचण्डले भने, ‘छलफल नगर्ने कहाँ भनेको छु, गरौंला। कुरा गरौंला।’
प्रधानमन्त्री ओलीले फ्याट्टै भनिदिए, ‘प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पद छाड्नेबाहेकका सबै कुरामा छलफल गर्न म पनि तयार छु।’
प्रचण्ड-नेपाल यही स्थायी कमिटी बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय कति जोडतोडले उठाउने भन्नेमा केही अघिसम्म दोमनमा थिए। प्रचण्ड-नेपालले गत वैशाख १७ को स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामा मागेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग खाडल बढ्दै गएको थियो। यी तीन महिनामा प्रचण्ड-नेपाल थप नजिकिएका छन्। तै पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसरी चुनौती दिने प्रस्ट ‘रोडम्याप’ तयार भइसकेको थिएन।
स्थायी कमिटी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर ठाउँ खोजिरहेका प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गत आइतबार मात्रै ‘बम्पर एजेन्डा’ दिएका थिए।
यसो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरासर झूट मात्र बोलेनन्, आफ्नो सत्ता जोगाउने स्वार्थमा मुलुकको स्वार्थ जानाजान ‘बलि’ दिए।
त्यो एकताले भारतसँग आत्मविश्वासका साथ वार्ता गर्ने म्यान्डेट र अवसर प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको थियो। भारतमै पनि सुरूमा नेपालले नक्सा जारी गर्नेबित्तिकै जुन आक्रोश देखिएको थियो र जसरी ‘चिनियाँ कार्ड’ को अफवाह फैलाइएको थियो, त्यो विस्तारै मत्थर हुँदै थियो।
‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेबापत् भारतले हटाउन खोज्दैछ भन्नुको अर्थ आफ्नै सांसद भारतको गोटी बनेर आफूलाई हटाउन तयार हुँदैछन् भनेको हो। आफ्नै सहयोद्धा र सहकर्मीमाथि यति संगीन आरोप ओलीले लगाए, ताकि यति भनेपछि उनीहरू आफूविरूद्ध कदम चाल्न हच्किने छन्। कदम चालिहाले भने भारतको इसारामा त्यसो गरेको आरोप उनीहरूलाई लाग्नेछ। उनीहरू लान्छित हुनेछन्।
नेता नेपालले केही समयअघि मसँग भनेका थिए, ‘ओलीलाई हामीले मनाउने प्रयत्न गर्यौं। प्रचण्डसँगै राखेर कुरा गर्यौं। सबै नेताले ओलीलाई उनले गरेको बाचा सम्झाए। तर, उनले त्यस्तो सहमति भएकै होइन भनेर जिते।’
नेता नेपालले थपे, ‘ओली जतिको सफेद झूट बोल्न सक्ने अर्को नेता नेपालमा छैन। प्रचण्ड पनि कुरा फेर्छन् तर मैले यस कारण फेरेँ भनेर भन्छन्।’
चुनावपछि कांग्रेसले प्रचण्डलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने ‘ब्ल्यांक चेक’ दिएको हो। कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने प्रस्ताव पठाएको थियो। तर, त्यसलाई इन्कार गरेर प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव संसदमा गरे। पछि पार्टी एकता नै गरे।
एक स्थायी कमिटी सदस्यले मसँग भने, ‘स्थायी कमिटीले निर्णय नगर्नु भनेको सधैं ओलीको दास बन्न स्विकार्नु हो। महाधिवेशनसम्म मात्र होइन, महाधिवेशनपछि पनि यस्तै फन्डा चलाएर उनले हामीमाथि शासन गर्नेछन्।’
अहिले आएर ‘बर्डन अफ डिसिजन’ (निर्णय गर्ने बोझ) प्रचण्ड-नेपालको टाउकामा परेको छ। पार्टीको जीवन-मरणको सवाल भएकाले निर्णय गर्न उनीहरूलाई सजिलो छैन। ‘निर्णय गर्ने बोझ’ कसरी प्रधानमन्त्रीमाथि सार्ने भन्ने चुनौती प्रचण्ड-नेपाललाई छ।
लोकतन्त्रको आधारभूत ‘प्लेबुक’ पछ्याउने हो भने त्यसो गर्न कठिन छैन। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने ठाउँ पार्टी कमिटी होइन। यो त ‘कम्युनिस्ट’ परिपाटी हो।
त्यो अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेस’ नगरी पार्टी फुटाउने निर्णय गर्न ओलीलाई सजिलो हुने छैन। कदाचित् उनले निर्णय गरे पनि अझै लामो राजनीतिक भविष्य भएका प्रधानमन्त्रीनिकट अरू नेतालाई सजिलो हुने छैन। लोकतन्त्रको आधारभूत नियम नमानेर पार्टी फुटाउने, आफ्नो बहुमतको सरकार छाडेर प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर सरकार बनाउने कलंक बोक्ने निर्णय गर्न ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेलहरूलाई कहाँ सजिलो होला र!
उनले भनिन्, ‘कस्तो परिपक्व सुझाव!’
आज एकैदिन राष्ट्रपतिले पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई भेटिन्। उनलाई मनपरेको त्यो ‘परिपक्व’ सुझाव दुवै नेतालाई दिइन् कि दिइनन्? वा, भोलि दिन्छिन् कि दिन्नन्?